नेविसंघ विवाद : संस्थापनलाई सहयोग नगर्दा तीन समूह दबाबमा - Naya Patrika
नेविसंघ विवाद : संस्थापनलाई सहयोग नगर्दा तीन समूह दबाबमा
कांग्रेसको पार्टी निर्देशक समितिले २ भदौसम्म कार्यतालिकासहित महाधिवेशनको सर्वसम्मत योजना ल्याउन निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू दबाबमा परेका छन् । समितिले एक सातामा महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएपछि संस्थापनभन्दा अर्को तीन समूह दबाबमा परेको हो । समितिले आपसी विवाद मिलाएर गर्न बाँकी एकाइ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश, कलेजको अधिवेशन गर्नेसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे तीन महिना नेविसंघको म्याद थप्न निर्देशन दिएको थियो ।
पुनः तदर्थ समिति बनाउन सक्ने सम्भावना
नेविसंघमा संस्थापन पक्षसँग विवाद बढाए पार्टी नेतृत्वले तीन महिना म्याद नथपी पुनः तदर्थ समिति बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो भएमा नेविसंघमा अहिलेको संस्थापन पक्ष नै हाबी हुन सक्नेछ । त्यसैले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइराला पक्षलाई आफ्नो असन्तुष्टि कायम राखेर भए पनि महाधिवेशनमा जाने गरी सहमति खोज्नुपर्ने दबाब र चुनौती देखिएको छ ।
‘सहमति गरेर यो मितिमा महाधिवेशन गर्छौं भन्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धता आए म्याद थपेर महाधिवेशनका लागि तीन महिना समय दिन्छौँ भनेर प्रस्ट भनेका छौँ,’ निर्देशन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देखिएका विवाद मिलाउन हामी सहजीकरण पनि गर्छौं, तर हाम्रो सहजीकरणले मात्रै पुग्दैन । उहाँहरूबीच नेविसंघलाई राम्रो बनाएर सहमति हुनुपर्छ ।’ महाधिवेशन गर्न विवाद मिलाएर कार्ययोजना नल्याए समय थप्ने पक्षमा आफूहरू नभएको महत बताउँछन् ।
तीन पक्षलाई अवसर पनि
१३औँ महाधिवेशनमा सिटौला पक्षले तत्कालीन देउवा पक्षलाई सहयोग गर्दा पार्टी नेतृत्व नै सो पक्षले जितेको थियो । नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघमा पनि यी दुई पक्ष मिल्दा अर्को पक्ष कमजोर बनेको थियो । तर, अहिले संस्थापन पक्षसँग सिटौला पक्ष असन्तुष्ट छ । सोही कारण शिक्षक, मजदुर, कानुन व्यवसायीसहितका संस्थामा संस्थापन देउवा पक्ष पराजित भएको छ ।
अहिले सिटौला पक्षको नेतृत्व महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले, मनोजमणि आचार्यले पौडेल र उर्मिला थपलियाले शशांक कोइराला पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
‘उनीहरूबीच विवाद छ । २ मंसिरसम्म म्याद बढाउन सकिन्छ, तर विशेष परिस्थिति देखाउनुपर्दा उनीहरूले पनि प्रस्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने जरुरी छ,’ निर्देशन समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरे भने, ‘एकै ठाउँमा बस, मेलमिलाप गर र नेविसंघलाई पहिलेजस्तो चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । हामीले दिएको मौका साना विवादबाट माथि उठेर नेविसंघलाई त्राण दिने मौका हो ।’ असन्तुष्टलाई नजिक आउने मौका रहेको भन्दै मिलेर गए अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व ल्याउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
विवाद मिलाउन ६ सदस्यीय कार्यदल
निर्देशक समितिले एक साताको समय दिएपछि विवाद मिलाउन अध्यक्ष नैनसिंह महरको नेतृत्वमा तीन महामन्त्री र दुई उपाध्यक्ष रहेको कार्यदल बनाउने तयारी भएको नेता महतले जानकारी दिए । कार्यदलले आपसी विवाद मिलाएर तीन महिनाभित्र महाविधेशन गर्न सकिने प्रस्ट कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ ।
अध्यक्ष महरले महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र सदस्यहरू बसेरै तय गरिने जानकारी दिए । ‘१७ वर्षदेखि ११ जिल्लामा विवाद छ । अहिले आएर भएको विवाद होइन । यो सहमतिमा नआईकन समाधान हुँदैन,’ महरले भने ।
सभापतिले विधान क्रस गरेपछि फरक मत : असन्तुष्ट पक्ष
नेविसंघमा असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका कुन्दनराज काफ्लेले विधिसम्मत महाधिवेशनका लागि आफूहरू तयार भए पनि सभापतिले विधान क्रस गरेको विषयमा फरक मत रहेको बताए । ‘हामी महाधिवेशनको पक्षमा छौँ, तर सभापतिले गर्नुभएका विधानविपरीतका काममा फरक मत छ । यही आधारमा संघलाई पार्टीले विघटन गर्ने बाटोमा लग्यो भने यो लोकतन्त्रविरोधी हुन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘पार्टीको नियत के हो ? ६ महिना अगाडि पार्टीले अग्रसरता लिनुपथ्र्यो । तर, समय सकिनुभन्दा १५ दिनअघि मात्रै समिति बनायो ।’